Posted by ashin kusalasami on February 23, 2011
ဘ၀မှာ အမှတ်တရလေးတွေ လူတိုင်း ရှိနေတတ်ကြတယ်။ ဦးဇင်းမှာလည်း အမှတ်တရလေးတွေ ရှိသပေါ့။ ၂-လပိုင်း၊ ၁၇-ရက်နေ့ဟာ ဦးဇင်းရဲ့ မွေးနေ့။ ဘယ်သောအခါကမှ မွေးနေ့ပွဲရယ်လို့ မလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး။ ဘာအထိမ်းအမှတ် ညာအထိမ်းအမှတ်တွေ စိတ်က သိပ်မပါလှဘူး။ အားလည်း မကျခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတလေတော့ မွေးနေ့မှာ သူများတွေက အရမ်းတောင်းဆိုလို့ စာအုပ်လေးဘာလေး လက်ဆောင်ပေးခဲ့ဖူးတာတော့ ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး ရန်ကုန်က သားတစ်ယောက်လို ခင်နေတဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်ကတော့ ရန်ကုန်မှာရှိစဉ်က နှစ်စဉ်မွေးနေ့ပွဲ လုပ်ပေးလေ့ရှိတယ်။ ဒါကလည်း သူ့သမီးနဲ့ မွေးနေ့ချင်း တူနေတော့ အတူတူ ရောလုပ်တဲ့သဘောပါပဲ။
ဆရာတော်ဦးဇောတိကရဲ့ အတွေးအခေါ်လေးတစ်ခုလည်း ဖတ်ဖူးတယ်။ မွေးနေ့ဆိုတာ သူ့အတွက် ဘာခံစားချက်မှ မဖြစ်စေတဲ့အကြောင်း၊ အခြားနေ့တွေလိုပဲ ကုန်လွန်စေလေ့ရှိကြောင်း Snow in the Summer ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးတယ်။ အရမ်းသဘောကျခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချို့နှစ်တွေမှာ ကိုယ့်မွေးနေ့ကို မေ့နေတတ်တယ်။ မွေးနေ့ကျော်သွားမှ ဦးဇင်းကို ခင်တဲ့သူတွေက Happy Birthday ဆိုမှ သတိရမိတာရှိတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ မနှစ်ကဆိုရင် ဦးဇင်းမွေးနေ့ကို ၂-ရက်လောက်ကျော်မှ သတိရတယ်။ ဘာကြောင့် သတိရတာလဲဆိုတော့ Facebook မှာ ဒကာမတစ်ယောက်က မွေးနေ့ဆုတောင်း ပို့လိုက်တာကြောင့်ပါ။ သူများတွေတော့ မသိ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရယ်မောနေဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဒီနှစ်တော့ Facebook လည်း သုံးနေတော့ ကိုယ့်မွေးနေ့ကို ရီမိုင်းလုပ်သူတွေ အတော်များလာတယ်။ ဒီတော့ မွေးနေ့ကို မမေ့ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် မွေးနေ့ကို ခံစားလို့မရတဲ့စိတ်ကတော့ မပြောင်းလဲပါဘူး။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ Happy Birthday လို့ Facebook မှာ သို့မဟုတ် တစ်နေရာရာမှာ စာလေးတွေ့လိုက်ရင် စိတ်ထဲမှာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမိတာတော့ အမှန်ပဲ။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ သူများတွေလို မွေးနေ့ပွဲလေးတစ်ခုခု လုပ်လိုက်ရရင် …. ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးလည်း ဒီနှစ်မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။
Happy Birthday လို့ Facebook မှာ ပို့ထားတာလေးတွေကို ကြည့်နေဆဲမှာ အခန်းကို လာလည်နေကျ တရုတ်ဒကာတစ်ယောက်နဲ့ ဒကာမတစ်ယောက် ရောက်လာတယ်။ “လွန်ခဲ့တဲ့ ၂-ရက်က ငါ့မွေးနေ့မို့လို့ မွေးနေ့ဆုတောင်းထားကြတာ”ဆိုတော့ “ဘာဖြစ်လို့ ဦးဇင်းမွေးနေ့ပွဲ မဖိတ်သလဲ”လို့ ပြောတယ်။ မဟုတ်ဘူး၊ ငါ မွေးနေ့ပွဲ လုပ်ကို မလုပ်တာလို့ ပြောဖြစ်တယ်။ ငါက မွေးနေ့ပွဲကို ငါ ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ လုပ်ချင်တာ။ သူတို့က အခု ငါ့အနားမှာ မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ငါ မွေးနေ့ပွဲ မလုပ်တာလို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဒါက အမှန်ပြောရရင် အမှန်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စကားဖြစ်အောင် လျှောက်ပြောလိုက်တာ။ “ဟုတ်လား ဒါဆို ဦးဇင်းကို မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးချင်တယ်”လို့ ပြောတယ်။ မလိုဘူး၊ ငါကပဲ ပေးချင်တယ်၊ မင်းတို့ မပေးပါနဲ့လို့ ပြောလိုက်တော့ မရပါဘူး။ တစ်ယောက်က အခန်းမွှေးတဲ့ ရေမွှေးဗူးလေး၊ တစ်ယောက် စတော်ဘယ်ရီမုန့်သေးသေးလေးတွေ နောက်နေ့မှာ လာပေးပါတယ်။ အခြားတရုတ်ဒကာမတွေလည်း သိတော့ ဖုန်းမက်ဆေ့တွေထဲမှာ Happy Birthday တွေနဲ့အတူ ဖုန်း Top up တွေပါ ရောက်လာတယ်။ သူတို့ထည့်ပေးတဲ့ ပိုက်ဆံက မများပါဘူး။ နည်းနည်းစီ ထည့်ပေးကြတာ။ ဒါပေမယ့် ပျော်မိပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဆိုပြီး ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ လိုက်ပြီး ဆွမ်းကပ်လို့ လိုက်စားခဲ့ရတယ်။ အတော်ထူးဆန်းတဲ့ ဆိုင်လေးပါ။ မြင်ကွင်းတွေကလည်း ထူးဆန်းပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်က ၂-ခြမ်းခွဲထားတယ်။ တစ်ခန်းက စားသောက်ဆိုင် သီးသန့်။ တစ်ခန်းက ညကျရင် အသောက်တွေ၊ အပျော်တွေလည်း ပါတယ်တဲ့။ နေ့ခင်းဆိုတော့ ဘာမှမရှိလို့ အခန်းတွေ အကုန်လိုက်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုင်တစ်ခုလုံးကို ထိုင်ခုံ၊ စားပွဲ၊ နံရံ၊ လိုက်ကာ၊ အားလုံးကို ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေလို လုပ်ထားတယ်။ ကြည့်ရတာ အသွင်အပြင်က ကြည်နူးစရာ၊ စိတ်ချမ်းသာစရာ၊ အေးချမ်းဖွယ် အပြင်အဆင်တွေ။ ဒီလို အေးချမ်းဖွယ်နေရာလေးမှာ ညချမ်းရောက်တာနဲ့ အပျော်အပါးတွေ စုံလာလိမ့်မယ်။ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးတစ်မည် ခံစားမိခဲ့တယ်။
စားသောက်ဆိုင် အ၀င်ဝမှာ မြတ်စွာဘုရား ရပ်တော်မူရုပ်တုတစ်ခု ထားတာကလည်း ဘက်နှစ်မျိုး ရှုမြင်လို့ ရတယ်။ တစ်မျိုးကတော့ ဒီလို မကောင်းတာတွေ၊ ကောင်းတာတွေ ရောထွေးဆူညံနေတဲ့အဆောက်အအုံ အ၀င်ဝမှာ ဒီလို ရုပ်တုကို ထားရှိတာ မြတ်စွာဘုရားကို မလေးစားရာ ကျတယ်။ နောက်အမြင်တစ်ခုကတော့ ဆိုင်အတွင်း ၀င်ဝင်ချင်းမှာ အေးချမ်းတဲ့ မြတ်စွာဘုရားရုပ်တုကို တွေ့လိုက်ရတော့ အေးချမ်းဖွယ်ဖြစ်တယ်။
အရင်က မစားဖူးတဲ့ ဂျပန်အစားအသောက်တွေ စားရလို့ ရပါ့မလားလို့ အနည်းငယ် ထင်ထားခဲ့ပေမယ့် မကြိုက်တဲ့ဟင်းကို မတွေ့ခဲ့ဘူး။ အသားအစိမ်းဆိုလည်း စားလို့ ကောင်းတာပဲ။ ငါးအစိမ်းလည်း စားလိုက်တာပဲ။ ဘေးက တရုတ်ဒကာနဲ့ဒကာမက အံ့သြနေတယ်။ အရင်က စားဖူးလားတဲ့။ မစားဖူးဘူးဆိုတော့ ပိုအံ့သြနေကြတယ်။ ထမင်းမပါ၊ ဟင်းတွေချည်းပဲ နေ့လည်စာ ပြီးခဲ့တယ်။
အဲဒီဆိုင်ကိုရောက်ဖို့ ပီနန်း၊ ကျောင်းကနေ ၁-နာရီကျော်ကျော်လောက် ကားနဲ့သွားရတယ်။ အပြန်မှာတော့ ကောင်းကောင်းအိပ်လိုက်လာမယ်လို့ စိတ်ကူးထားခဲ့ပေမယ့် အိပ်လို့မရခဲ့ဘူး။ သိတာမှ မကြာသေးတဲ့သူတွေက ကိုယ့်အတွက် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်တွေ လုပ်ပေးတော့ စိတ်ထဲမှာ ဖော်မပြတတ်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေက လူးလားခေါက်တုန့် ဖြစ်နေခဲ့တယ်။
ခဏလောက်ကြာတော့ “ဦးဇင်း မအိပ်ဘူးလား၊ ဘာတွေးနေတာလဲ”လို့ တရုတ်ဒကာမက မေးမှ “ငါ ပျော်နေတယ်လို့ ပြောရင် မင်း ယုံမလား”လို့ ပြောလိုက်မိပါတယ်။
Ashin Acara. said…
ကာမဂုဏ်ဆိုတာ ဒီလိုပါပဲလို့ လျှောက်လိုက်မိရင် ဇင်ဘုန်းကြီးတွေက ရယ်လောက်တယ် :)
အဲလို ဆိုင်တွေမှာ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေ ထားတာကို တော်တော် အချဉ်ပေါက်နေမိတယ်။
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့များစွာကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ.။
ဗဟုသုတ.. နဲ့ အသိပညာ၊ သတိတရား လေးများကိုလည်း ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေဘုရား.။
(Tawfik Hamid ရဲ့ From the heart ofaMuslim ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ပါတယ်။) ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့် ယုံကြည်ချက်နဲ့ မွတ်စလင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဆန္ဒအရဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ဟာ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ပေါ့။ နှလုံးသားအရတော့ ဂျူးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ခြုံကြည့်လိုက်ရင်တော့ ကျွန်တော်ဟာ လူသားတစ်ယောက်ပါ။ ဒေါက်တာ ဟာမစ်ဆိုတာ တယူသန် မွတ်စလင်တွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ စာရေးဆရာ၊ အီဂျစ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ မွတ်စလင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မွေးလာတယ်။ ကျွန်တော့်ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အစ္စလာဟ်ဘာသာဝင်တစ်ဦးလိုပဲ နေခဲ့တယ်။ ရက်စက်ကြမ်းတမ်းတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ကျွန်တော်နဲ့ဘ၀တူ မွတ်စလင်တွေက ကမ္ဘာ့အနေရာအနှံ့အပြားမှာ လုပ်ဆောင်နေကြတာကို တွေ့ပြီးနောက်မှာ၊ ပြီးတော့ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားက အစ္စလာဟ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုများကို တွေ့မြင်ရဖန်များလာပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျွန်တော့်မှာ ခံစားချက်လေးတစ်ခု ပေါက်ဖွားလာခဲ့တယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်ဟာ မွတ်စလင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို လူသားတစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက် အမှန်တရားကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားဖို့ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ပါ။ ဒီခံစားချက်က အစ္စလာဟ်ဘာသာနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ကပ်ဘေးတွေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတိုက်ပွဲတွေကနေ ကာကွယ်